Maamulka madaxweyne Trump oo cunaqabateyn hor-leh kusoo rogay Iran iyo madaxweynaha Venezuela | Somalia News
Maamulka madaxweyne Trump oo cunaqabateyn hor-leh kusoo rogay Iran iyo madaxweynaha Venezuela
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Qaramada Midoobay aysan taageeri doonin cunaqabateyn lagu soo rogo Iran oo uu Mareykanku dalbanayo illaa buu yiri uu ogolaansho arrintaasi ah ka helo Golaha Ammaanka.
Mr. Gutteres ayaa ku sheegay warqad uu u diray madaxweynaha golaha oo Axadii ay heshay wakaaladda wararka ee AP in ay muuqato hubanti la’aan ku saabsan in Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo uu kiciyay hanaanka dib u soo celinta cunnaqabateynta ee ku saabsan qaraarka Golaha Amniga ee dhigaya heshiiskii Nukliyeerka ee 2015 dhexmaray Iran iyo lix quwadood oo waaweyn.
Dhinaca kale, dowladda Mareyka ayaa shalay oo Isniin aheyd cunaqabateyn kusoo rogay in ka badan 27 ruux iyo hey’ado ku lug leh niyukleerka, gantaallada iyo barnaamijyada hubka caadiga ah ee dalka Iran.
Sidoo kale Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub isna saaray madaxweynaha Venezuelas Nicolás Maduro kaas oo ay ku eedeeyeen in uu sare u qaaday xiriirkiisa Iran.
Wasiirka arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in uu wali sii jiri doono cunaqabateynta hubka ee saaran Iran kaas oo xilligiisu dhacayay 20-ka mishan Sebtember, islamarkaana Qaramada Midoobay ka diiday in lasii wado.
Mareykanka ayaa u hanjabay waddamada jabiya cunaqabateyntaasi oo sharci ahaan ku ekeyd 20-ka bishan.
Previous articleXOG: Wejiyaal cusub oo ka soo dhex muuqanaya Xukuumadda cusub & Odawaa oo..
Next articleMaxaa ku khasbay Guddoomiye Cawad inuu Kursigiisa kala soo cararo Puntland?